स्कुलमा लिन दुई मिनेट ढिला पुग्दा छोराको अपहरण
अपहरित बालक आफ्ना आमाबाबुका साथ।
राजधानीमा गत बिहीबार स्कुलबाटै साढे ५ वर्षीय बालकको अपहरण भयो। अपहरणकारीहरूले फोन गरेर फिरौती मागे। आमाबाबुले प्रहरीमा उजुरी दिए। तीन दिनको अनुसन्धानपछि सोमबार अपहरित बालकको सकुशल उद्धार गरियो।
प्रहरीले अनुसन्धान अवधिभर गोप्य राखेको यो घटना कसरी भयो? र, कसरी उद्धार गरियो?
असनका व्यापारी अजय चौधरीका छोरा राजधानीको क्षेत्रपाटीस्थित स्कुलमा पढ्छन्। उनी छोरालाई लिन सधैं अपराह्न ३ बजेर ३५ मिनेटमा स्कुल पुग्थे। बिहीबार भने दुई मिनेट ढिला भयो। उनी पुग्दा स्कुल छुट्टी भएर केटाकेटी घर फर्कन थालिसकेका थिए। एकछिन पर्खंदा पनि उनले आफ्नो छोरा भेटेनन्।
उनले स्कुलको चौर, कक्षाकोठा सबैतिर खोजे। कहीँ भेटिएनन्।
अजयले स्कुलकी शिक्षिकासँग छोराका बारेमा सोधिखोजी गरे। शिक्षिकाले पनि जानकारी दिन सकिनन्।
स्कुलमा हल्लीखल्ली भयो। उनी पुग्नुअघि नै कसैले आएर बालकलाई लिएर गइसकेको थाहा भयो।
स्कुलले आमाबाबुबाहेक अरूलाई कसरी बच्चा जिम्मा लगाउन सक्छ भनेर अजय रिसाए। सँगसँगै छोरालाई स्कुलबाटै कसले लिएर गयो होला भन्ने प्रश्नले उनलाई छट्पटी भयो। कोही चिनेजानेकैले लगेको हुनसक्छ भन्ने आसमा बेलुकीसम्म पर्खे।
रात परिसक्दा पनि छोराको अत्तोपत्तो भएन।
उनीहरूले महानगरीय अपराध महाशाखा गएर छोरा हराएको रिपोर्ट लेखाए।
महाशाखाका डिएसपी अजय केसी नेतृत्वको टोलीले छानबिन अघि बढायो। स्कुलको सिसिटिभी फुटेज हेर्दा चौधरी पुग्नुभन्दा दुई मिनेटअघि उनको छोरालाई कसैले मोटरसाइकलमा राखेर लगेको देखियो। त्यही फुटेज र अन्य अनुसन्धानका आधारमा प्रहरीले अपहरणकारी पहिचान गर्यो।
अपहरणकारी पहिचानपछि पनि प्रहरीले सिधै गएर छापा मार्ने जोखिम मोल्न नचाहेको महाशाखा प्रमुख दिनेश अमात्यले बताए। ‘अपहरणकारी पक्राउ गर्नेभन्दा बालकको सकुशल उद्धार गर्ने हाम्रो चासो थियो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
यसबीच शुक्रबार अपहरणकारीले अजयलाई फोन गरेर ५० लाख रुपैयाँ फिरौती मागेका थिए। उनले ‘हुन्छ’ पनि भनेका थिए। तर, कहाँ गएर कसरी फिरौती हस्तान्तरण गर्ने सहमति हुन सकेको थिएन।
अजयले यो सूचना पनि प्रहरीलाई दिए। यहीँबाट प्रहरीले अपहरणकारीसम्म पुग्ने बाटो फेला पारेको थियो।
‘हामी अपहरणकारीको नम्बरमा कहिले अजयको आफन्त बनेर फोन गर्थ्यौं त कहिले साथी बनेर,’ अनुसन्धान अधिकारी डिएसपी केसीले भने, ‘यही आधारमा उनीहरूको पछिल्लो अवस्था पत्ता लगाएर ट्रयाक गर्न थाल्यौं।’
अनुसन्धानकै क्रममा एक जना अपहरणकारी पक्राउ परे।
‘आफूमध्येकै साथी समातिएपछि उनीहरू हच्किएछन्,’ केसीले भने, ‘पैसा लिने ठाउँ टुंगो लगाउन नसकेको र त्यसमाथि प्रहरीले धुइँपत्ताल खोजिरहेको छ भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरू डराएछन्।’
त्यसपछि अपहरणकारीले सोमबार बिहान भक्तपुर, काँडाघारीमा बालकलाई छाडिदिएको प्रहरीले जनाएको छ। बीच सडकमा अलपत्र बच्चा फेला परेपछि स्थानीयले नै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले सडकबाटै बालक उद्धार गरेका थिए।
चार दिन अपहरणमा परेका भए पनि बालक हाँसीखुसी देखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
स्कुले पोसाकमा अपहरित उनी नयाँ रातो टिसर्ट, सेतो हाफपाइन्ट र कालो चप्पल लगाएको अवस्थामा भेटिएका थिए। उनको स्कुले झोला र त्यसभित्र किताब जस्ताको तस्तै थियो। एक प्याकेट चाउचाउ र जुस पनि थियो। बालकले आफूलाई ‘चिनेकै अंकलले मिठो खानेकुरा किन्दिछु भन्दै बाइकमा हालेर लगेको’ बताएका छन् ।
प्रहरीले सोमबार दिउँसो असनमा परिवारलाई बालक जिम्मा लगाउँदा आमा निर्मला र बाबु अजय भावुक बनेका थिए।
प्रहरीका अनुसार बालकको अपहरण अजयका नजिकका साथी राजु विश्वकर्माले गरेका हुन्। उनी परिवारसहित फरार छन्। रकम असुल्ने मनसायले अपहरण गरेका भए पनि सफल हुन नसकेको प्रहरीको दाबी छ।
अपहरणकारीले एउटा स्कुटर र मोटरसाइकल प्रयोग गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार अपहरणका मुख्य योजनाकार विश्वकर्मा घटना भएको दिन साँझ अजयसँगै अपराध महाशाखामा उजुरी गर्न गएका थिए।
अपहरणमा संलग्न अरू फरार भए पनि उनीहरूले बेलाबेला अजयलाई फोन गरेर ‘झुक्किएर तपाईंको छोरा अपहरण गर्न पुगेको’ बताउँदै आएका छन्।
‘छोरा हराएदेखि चार दिन मैले केही खाएको थिइनँ, श्रीमती पनि बेहोस थिइन्, म आफैंले आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेको थिइनँ,’ अजयले भने, ‘अहिले पुनर्जन्म पाएको महशुस भइरहेको छ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १८, २०७४ ०५:०१:५८